बजेटको बारेमा अर्थमन्त्रीको जवाफ अहिले हामि म्याराथनमा छौ ,हार जितको कुरा नगरौ ,, – Ranga Darpan
बजेटको बारेमा अर्थमन्त्रीको जवाफ अहिले हामि म्याराथनमा छौ ,हार जितको कुरा नगरौ ,,
जेठ,२० काठमाडौं – अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आज बजेटको बारेमा आयका प्रश्नको जवाफ दियका छन्। उनले भने आफूहरु लामो यात्रामा रहेको र अहिले नै हार जितको कुरा नगर्न आग्रह समेत गरेका छन् ।
बजेटको नीति तथा कार्यक्रम र वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा छु्टेको भन्ने प्रसंगमा जवाफ दिँदै उनले भने हामि लामो यात्रा छौ। यो वर्ष छुटेका कुरा हरुलाई अर्को वर्ष पुरा गर्न सकिन्छ ।तेसैले अहिले नै हाम्रो बारेमा टिका टिप्पणी गर्ने पर्ने जस्तो देख्दिन खतिवडाले भने।
पहिलो ५ सय मिटर कु्द्दैमा कसले जित्छ कसले हार्छ ? को अगाडि, को पछाडि भन्ने निर्क्योल गर्नु छिटो हुन्छ’ उनले भने ‘नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न केही कुरा छुटे भन्नु ५०० मिटरमै जित हारको निर्क्योल गर्न खोज्नु हो । हेर्दै जाउँ हामी म्याराथन जित्छौं ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने विषय आउँदा बजेटमा संबोधन गर्ने बताए । सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्दै कहिँ कतै साना गल्ति हुन सक्छन तर ति सबै आउँदा वर्ष पुरा हुने समेत अर्थमन्त्रीले बताय।
योवनले छायो जवानीको मज्जा लुटम सुमी मोक्तान ,,
हवाई भाडा बढ्यो कँहा कति लाग्छ , ( सुची सहित ) ,,